The Global Textile Machinery Market kukura pane imwe CAGR pamusoro 8.28% panguva 2018-2022.
The Global Textile Machinery Market 2018-2022, wakagadzirirwa kwakavakirwa inosimbisa musika kuongorora pamwe zvinoshandisa pakurima kubva indasitiri nyanzvi. Mushumo anofukidza musika nzvimbo yaro kukura tarisiro mumakore anouya. Mushumo anosanganisirawo kukurukura kiyi vapemhi anoshandira pamusika uyu.
Maererano nomushumo, mumwe mutyairi achifurira musika ichi ndiko kuzvimba kudiwa vasiri dzakarukwa micheka. Micheka Nonwoven vari engineered jira zvinogadzirwa kuti zvinobviswa pfupi sadza fibers kana refu kuramba fibers, kushandisa makemikari kana zvokuimba chokuedza mitoo, uye vari kana dzakarukwa kana dzakarukwa. Non-dzakarukwa micheka anogadzirwa vakuru-nokukurumidza uye rweruzhinji pezvakaitwa.
Mumwe Muitiro kukanganisa musika ichi ndicho kushandisa michina iri Whitehead Textile muchini. Kushandisa michina inoita inokosha basa kunatsiridza unhu uye mutengo-makwikwi mu Whitehead Textile mukugadzira. Zvoga Whitehead Textile michini Inowedzera Whitehead Textile kugadzirwa uye anowedzera kuerera mwero rejira, nokudaro oita dzakaonda mukugadzira. Kushandisa michina inoita basa rinokosha mune internet kugadzira, rushava kugadzira, kurukiswa, värjäys, uye okugadziridza kwendangariro.
Uyezve, mashoko rinoti mumwe dambudziko kukanganisa musika uyu donje yakakwirira mutengo kukanganisa Kukosa indasitiri. Cotton ndeimwe chikuru mbishi zvinhu nokuda Kukosa indasitiri. Kuwedzera donje mitengo rinokanganisa Whitehead Textile indasitiri yose.
Post nguva: Oct-24-2018